Mampibaribary ny lainga nentina nitsarana Azy i Jesoa ary nitaona ireo mpihaino mba hino Azy – FJKM Ambavahadimitafo Mampibaribary ny lainga nentina nitsarana Azy i Jesoa ary nitaona ireo mpihaino mba hino Azy |
Mampibaribary ny lainga nentina nitsarana Azy i Jesoa ary nitaona ireo mpihaino mba hino Azy
Publié le 20 novembre 2012 à 12:11
Jaona 8:39-47 : « 39Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy: Raha zanak’i Abrahama ianareo, dia ny asan’i Abrahama no hataonareo. 40Fa ankehitriny ianareo mitady hamono Ahy, Izay Lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin’Andriamanitra; tsy mba nanao izany Abrahama. 41Hianareo manao ny asan’ny rainareo. Hoy ireo taminy: Tsy mba teraka avy tamin’ny fijangajangana izahay; iray Ray izahay, dia Andriamanitra ihany. 42Hoy Jesosy taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy ianareo, satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako at? ; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy. 43Nahoana no tsy azonareo ny teniko? satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. 44Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin’ny taloha, ary tsy nitoetra tamin#’ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga. 45Fa satria
milaza ny marina Aho, dia tsy inoanareo. 46Iza moa aminareo no mampiseho Ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino Ahy? 47Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin’Andriamanitra ianareo. »